ရေအောက်ထဲမှာ အပြင်းအထန် လေကျင့်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန် - ZeeKwat
Home » Hot News » ရေအောက်ထဲမှာ အပြင်းအထန် လေကျင့်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
ရေအောက်ထဲမှာ အပြင်းအထန် လေကျင့်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
One Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့ MMA ၀ိတ်တန်းနှစ်ခု ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်ဟာ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအတွက် အကြိုပြင်ဆင်မှုတစ်ရပ်အနေနဲ့ ရေအောက်ထဲမှာ အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်နေပုံများကို သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေတစ်ဆင့် ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေကတော့အနားယူရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ အပြင်းအထန်လုပ်ရဦးမယ့်Trainingအတွက်လည်းအားပြန်ဖြည့်ရတာပေါ့။သုံးပတ်တောင်မလိုတော့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ One Championshipရဲ့ ကစားကွင်းထဲမှာမြန်မာပြည်ကိုကိုယ်စားပြုပြီး ပြန်ကစားရဦးမှာပါ။MMA Fighter တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုယ်စားပြုပြီးပြိုင်ရတာ ကျွန်တော့အတွက်ဂုဏ်အယူရဆုံးပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော့်ရဲ့ပရိသတ်တွေ မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်မှူတွေယူလာပေးပါမယ်။
Sunday isaday to relax and get ready foraweek of hard training. Less than3weeks left and I am back in the ONE Championship cage representing 🇲🇲. As an MMA fighter I am honored to be able to represent my people. I’m blessed to be able to compete and bring happiness and pride to my people, my family and my friends”
မြန်မာ့စပါးအုံးမြွေ အောင်လအန်ဆန်နဲ့ လက်ဘနွန်နိုင်ငံသား မိုဟာမက်ကရာကီတို့ ထိုးသတ်ကြမယ့် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသား အားကစားရုံ (၁) သုဝဏ္ဏမှာ ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါတယ်။အသက် (၃၃) နှစ်အရွယ် အောင်လအန်ဆန်ဟာ MMA ပြိုင်ပွဲ ၃၃ ပွဲမှာ ၂၃ ပွဲနိုင်၊ ၁၀ ပွဲ ရှုံးနိမ့်ထားပြီး ဇွန်လ ၂၉ ရက်က နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်တဲ့ MMA ပြိုင်ပွဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံသား ကန်ဟန်ဆက်ဂါဝါကို အနိုင်ရရှိကာ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံ ခါးပတ်ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အောင်လနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မယ့် ပြိုင်ဘက် အသက် (၂၇) နှစ်အရွယ် မိုဟာမက်ကရာကီဟာ MMA သက်တမ်း တစ်လျှောက် ကိုးပွဲ ထိုးသတ်ကာ ကိုးပွဲစလုံး အနိုင်ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး ဧပြီ ၅ ရက်က နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်တဲ့ MMA ပြိုင်ပွဲမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား ဒက်ဟက်ဆီကို ပထမအချီအတွင်း အလဲထိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။
One Championship ပွိုငျပှဲရဲ့ MMA ၀ိတျတနျးနှဈခု ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျဟာ မဈဒယျဝိတျတနျး ခနျြပီယံကာကှယျပှဲအတှကျ အကွိုပွငျဆငျမှုတဈရပျအနနေဲ့ ရအေောကျထဲမှာ အပွငျးအထနျ လကေ့ငျြ့နပေုံမြားကို သူရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါကနတေဈဆငျ့ ဖျောပွသှားခဲ့ပါတယျ။
“ပွီးခဲ့တဲ့တနင်ျဂနှကေတော့အနားယူရတဲ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။ပွီးတော့ အပွငျးအထနျလုပျရဦးမယျ့Trainingအတှကျလညျးအားပွနျဖွညျ့ရတာပေါ့။သုံးပတျတောငျမလိုတော့တဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ One Championshipရဲ့ ကစားကှငျးထဲမှာမွနျမာပွညျကိုကိုယျစားပွုပွီး ပွနျကစားရဦးမှာပါ။MMA Fighter တဈယောကျအနနေဲ့ မွနျမာပွညျပရိသတျတှအေတှကျကိုယျစားပွုပွီးပွိုငျရတာ ကြှနျတော့အတှကျဂုဏျအယူရဆုံးပါ။ဒီပွိုငျပှဲမှာကြှနျတေျာ့ရဲ့ပရိသတျတှေ မိသားစုတှေ သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေအေတှကျ ဂုဏျယူစရာတှနေဲ့ ပြျောရှငျမှူတှယေူလာပေးပါမယျ။
မွနျမာ့စပါးအုံးမွှေ အောငျလအနျဆနျနဲ့ လကျဘနှနျနျိုငျငံသား မိုဟာမကျကရာကီတို့ ထိုးသတျကွမယျ့ မဈဒယျဝိတျတနျး ခနျြပီယံကာကှယျပှဲကို အောကျတိုဘာ ၂၆ ရကျ ရနျကုနျမွို့ အမြိုးသား အားကစားရုံ (၁) သုဝဏ်ဏမှာ ကငျြးပမညျ ဖွဈပါတယျ။အသကျ (၃၃) နှဈအရှယျ အောငျလအနျဆနျဟာ MMA ပွိုငျပှဲ ၃၃ ပှဲမှာ ၂၃ ပှဲနိုငျ၊ ၁၀ ပှဲ ရှုံးနိမျ့ထားပွီး ဇှနျလ ၂၉ ရကျက နောကျဆုံးယှဉျပွိုငျတဲ့ MMA ပွိုငျပှဲမှာ ဂပြနျနိုငျငံသား ကနျဟနျဆကျဂါဝါကို အနိုငျရရှိကာ မဈဒယျဝိတျတနျး ခနျြပီယံ ခါးပတျကို ကာကှယျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အောငျလနှငျ့ယှဉျပွိုငျထိုးသတျမယျ့ ပွိုငျဘကျ အသကျ (၂၇) နှဈအရှယျ မိုဟာမကျကရာကီဟာ MMA သကျတမျး တဈလြှောကျ ကိုးပှဲ ထိုးသတျကာ ကိုးပှဲစလုံး အနိုငျရရှိထားသူဖွဈပွီး ဧပွီ ၅ ရကျက နောကျဆုံးယှဉျပွိုငျတဲ့ MMA ပွိုငျပှဲမှာ ပွငျသဈနိုငျငံသား ဒကျဟကျဆီကို ပထမအခြီအတှငျး အလဲထိုးဖွငျ့ အနိုငျရရှိခဲ့တယျ။
Ref – Aung La Na Sang Facebook